Fasaxa 2020 Nooga Bartay Xeeladaha Suuq Geynta Mobilada 2021 | Martech Zone
Muxuu Fasaxa 2020 Nooga Baray Istaraatijiyadaha Suuq Geynta Mobilada ee 2021
Isniin, Janaayo 11, 2021 Isniin, Janaayo 11, 2021 Joe Intile
Way iska socotaa iyada oo aan la sheegin, laakiin xilligii ciidaha ee 2020 wuxuu ka duwanaa kuwa kale ee aan khibrad ahaan u soo aragnay. Iyada oo xayiraadaha kala fogeynta bulshada ay mar labaad ka qabanayaan adduunka oo dhan, dabeecadaha macaamiisha ayaa ka beddelaya caadooyinka soo jireenka ah.
Xayeysiistayaasha, tani waxay sii fogeyneysaa istaraatiijiyad dhaqameedka iyo Guri-ka-baxa (OOH), waxayna u horseedaysaa ku-tiirsanaanta ka-shaqeynta mobilada iyo dhijitaalka. Marka lagu daro bilaabista hore, wax aan horay loo arag Kaadhadhka hadiyadaha waxaa lafilayaa in waqtiga fasaxa sifiican loogu kordhiyo sanadka 2021.
Dukaameeysyaashu kaliya kuma qarashgareyso kaararka hadiyadda (17.58%) sannadkan, laakiin waxay iibsanayaan kaararka hadiyadda si isdaba joog ah (+ 12.33% YoY).
Farsamaynta farriimaha ciidaha iyo dhiirrigelinta wax ku iibsiga iyada oo loo marayo mobilada iyo kanaalada dhijitaalka ah waxay noqon doonaan xirfad lagama maarmaan u ah suuqleyda inay isku duubnaadaan sannado badan oo soo socda.
70% kaararka hadiyadaha waxaa lagu soo furtay 6 bilood gudahood markii la iibsaday.
In kasta oo xayeysiinta moobiil ahaan taariikh ahaan ay saameyn ku yeelatay, haddana waa inaan ka taxaddarnaa caqabadaha gaarka ah ee haysta: macaamiisha u weecanaya inay wax ka iibsadaan shaashadaha yar yar waxay ka dhigan tahay hanti ma guurtada ah oo ka yar xayeysiinta. Intaa waxaa sii dheer, u janjeerida ku wareejinta aaladaha moobaylka micnaheedu waa in dareenka feejignaanta uu ka gaaban yahay weligiis dhex badweynta xayeysiisyada la midka ah.
Tani waxay ka dhigeysaa mid aad muhiim u ah in astaantaada la kala saaro, iyadoo la hubinayo in farriinta hal-abuurka ah ay si kooban ugu dirto farriimaha saxda ah, si wanaagsan ula fadhiso kuwa wax iibsanaya, iyo ficil wadista oo horseedda natiijooyinka la doonayo Tallaabada ugu horreysa ee loo muujiyo taabashada shakhsiyadeed ee macaamiisha waxay ka timaaddaa habka hal-abuurka ah ee ka dambeeya suuqgeynta wax soo saarkaaga.
Kubilaaw Qorshe Ciyaar iyo Qalab Sax ah
Tallaabada ugu horreysa ee muhiimka ah ka hor intaadan qorin ereyga nuqul ka mid ah waa in la fahmo laba tiir oo muhiim ah:
Yaad rabtaa gaaraan?
Waa maxay tallaabo ma waxaad rabtaa inay qaataan?
Kahor intaadan qodin farriinta iyo sawirka, marka hore tallaabo hore u qaado oo ka fikir waxa aad isku dayeyso inaad ku guuleysato. Ma waxaad isku dayeysaa inaad kor u qaaddo wacyigaaga astaantaada? Ma suuq cusub ayaad u soo bandhigaysaa? Ma isku dayeysaa inaad kor u qaaddo iibinta?
Jawiga wareega, waxay u egtahay in ujeedooyinkaas oo dhami aysan suurta gal noqon doonin, laakiin qorshaha ciyaarta saxda ah, waxaad ku dhisi kartaa olole kor u qaadis ah si aad ugu dhisto kaqeybgal ujeedooyinkaas oo dhan. Fekerkan toosan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad jarto buuqa oo aad abuurto daqiiqad sumcad saameyn leh.
Hayso Qalab Baaxad Leh oo Aad Ka Xulato
Markaad tilmaamto istiraatiijiyad cad iyo yoolal, u jeedsada qalabkaaga. Waxaa jira qalab kaladuwan oo buuxa oo kaa caawinaya inaad hubiso in hirgelintaada hal-abuurka ah ay guuleysato - keydinta bakhaarada, awoodaha warbaahinta ee hodanka ah, fiidiyowga, waxyaabaha bulshada ka jira, iyo in ka badan.
Si loogu dhex daro dijitaal ahaan, ku tiirsanaanta aaladaha dhijitaalka ah sida isdhexgalka iyo ciyaarta ayaa sii kordheysa noqoshada dhismooyinka ololeyaasha guuleysta iyo ka caawinta magacyada inay istaagaan. Iyadoo aan loo eegin baakadaha hal-abuurka ah, ka-qaybgalka iyo wicitaan cad oo loogu talagalay ficil ayaa lagama maarmaan u ah farriinta hal-abuurka ah ee ku habboon macaamiisha qaab macno leh iyo saameyn leh.
Ku dar Mawduuca Kaarka Hadiyadda halka ay ku habboon tahay
Marka la eego dhaqsaha sare ee kaararka hadiyadda xilligan ciidaha, kor u qaad kaararkaaga hadiyadaha ah kuna dar talooyinka ku habboon si aad u dhiirrigeliso isticmaalka. Tan waxaa ka mid ah xiriiriyeyaal waxtar leh oo ku saabsan dhammaan farriimaha u oggolaanaya dadka isticmaala inay hubiyaan dheelitirka oo ay helaan talooyin ku habboon oo ku saleysan iibsiyada hore si kuwa hela kaarka hadiyadda ay u helaan dhiirrigelin ku saleysan isbeddellada iibsadaha wadajirka ah ama dhacdooyinka dabeecadaha iibsashada gaarka ah. .
Sheekooyinka Guusha ee Istiraatiijiyadda Istiraatiijiyadda
Dhamaan waqti kasta oo adag oo loogu talagalay xayeysiistayaasha, waxaa jira guuleysteyaal dabiici ah; sumadaha ku kala jabay sawaxanka istiraatiijiyad feker leh, soo jiidasho leh hal abuur, iyo soo bandhig firfircoon. Waa kuwan qaar ka mid ah ololayaasha isku dhafan mid kasta oo ka mid ah waxyaabahan si loo abuuro istaraatiijiyado guuleysta:
Dad badan! - Tafaariiqle Mareykan ah ayaa abuuray a ololaha kaas oo maalin walba gaarsiin jiray macluumaad ku saabsan hadiyadaha iyo heshiisyada macaamiisha. Qeybtan hal-abuurka ah waxay isku darsatay galleello la beddeli karo oo ay ka kooban tahay muuqaal animation ku leh shax kasta, oo leh shay u gaar ah oo fasax ah oo fasax leh si uu ula macaamilo dadka wax iibsanaya xitaa in ka badan. A dukaanka hadda wac wicitaanka ficilka (CTA) ka dibna u horseeday bogga iibsashada alaabada. Tani waxay ahayd mid si heer sare ah loogu guuleysto hal abuurkeeda marka la isku daro awoodaha warbaahinta hodanka ah iyo madadaalo, sawir qayaxan.
Dabaqadaha Josh - waxay u qaateen qaab dhaqameed dhaqameed ololahooda ciida, iyagoo kaashanaya shaashad buuxda, fiidyow saameyn badan leh. Sawirrada raaxada leh ee khamriga lagu shubay meel u dhow dab guuxaya waxay u abuureysaa kiis isticmaalka xaasidnimada ah ee badeecada, waxayna dhistaa qiimaha aan la taaban karin ee badeecada iyadoo aan laga dalban hal-abuurka daawadayaasha. The bogga degitaanku waa mid fudud oo elegan aht, oo ay ku jiraan laba ka mid ah guryahoodii ugu sarreeyay uguna xirnaa xiriiri si ay u iibsadaan khamriga hadda.
STIHL - Bixiye caalami ah oo ka mid ah qalabka korontada iyo baytariyada ayaa isticmaalay olole mowduuc mawduuc leh kaas oo animation furitaanku ku soo booday xirmooyin ka mid ah xirmooyinkooda aaladda mawduuca-midabka iyo awoodda. Dhag-dhigga CTA-ga ayaa macaamiisha u horseeday waayo-aragnimo la beddeli karo, nalalka ciidaha ee kor ku xusan, halkaas oo aad kaga adeegan karto saddex heshiis oo kala duwan. Hawlgal dheeri ah ayaa u horseeday daawadayaasha bogga faahfaahinta badeecada iyo keyd bakhaar si ay u helaan dukaanka ugu dhow ee iibiya alaabadooda. Ololahani wuxuu qabtay shaqo aad u wanaagsan oo ah isku-darka animation-ka warbaahinta iyo is-dhexgalka si loo abuuro qayb soo jiidata oo wada wacyiga wax soo saarka / heshiiska, iyo sidoo kale qalab weyn oo lagu helo ganacsadaha ugu dhow.
Ku guuleysiga fasaxan iyo wixii ka dambeeya waxay u baahan doonaan shirkadaha inay mudnaanta siiyaan ololeyaal hal-abuur shakhsiyadeed oo u soo jiita macaamiisha iyada oo loo marayo isdhexgal, fariin macno leh, iyo is-dhexgal. Inkasta oo midkani kan kale ka duwanaan karo, haddana waa tan si ugu wanaagsan looga faa’iideysto xilligan fasaxa ah. Ammaan ahaw!
Tags: badan oo waaweynisbeddellada iibsadahawac talaabociyaarahafurashada kaarka hadiyaddakharashka kaarka hadiyadahakaararka hadiyaddaisbeddellada dukaamaysiga fasaxaisdhexgalkameerayaasha joshxayeesiinta mobileOOHguriga ka baxsanka baxsan xayeysiinta gurigastihlxayaysiis dhaqameed
Joseph Intile waa Agaasimaha Hal-abuurka ee InMarket wuxuuna leeyahay 10 + sano oo khibrad ah oo u shaqeynaya sidii guri iyo naqshadeeye madaxbanaan, oo ku takhasusay sameynta, daabacaadda iyo nashqadeynta ku saleysan moobiilka.
KWI: Midaysan CRM, POS, Ecommerce iyo Badeecad u iibinta Ganacsatada Gaarka ah